I-China Mineral Fiber Ceiling BH003 yomzi mveliso kunye nabavelisi | Beihua
Kwindawo evulekileyo yeofisi, iibhodi zoboya bezimbiwa zingayiphelisa ngokufanelekileyo ingxolo ebangelwa ziindlela zonxibelelwano, izixhobo zeofisi, kunye nomsebenzi wabasebenzi, ukunciphisa ukubuyiswa kwengxolo yangaphakathi, kwaye zenze ukuba abasebenzi bakwazi ukujonga ngcono, baphucule ukusebenza, kunye nokunciphisa ukukhathala komsebenzi. Kwindawo evaliweyo yeofisi, ibhodi yoboya yamaminerali ifunxa kwaye ithintele ukusasazeka kwamaza omoya emoyeni, ngempumelelo ifezekise isiphumo sokufakwa kwesandi, ukuqinisekisa ubumfihlo begumbi lesandi, kunye nokunciphisa ukuphazamiseka okufanayo kwamagumbi ajongene nawo.
Kwigumbi lokufundela okanye kwigumbi lenkomfa, ilizwi lesithethi kufuneka liviwe ngokucacileyo ngababukeli nakwesiphi na isikhundla ukuqinisekisa ukuba uyaqondwa ngokuchanekileyo. Ke ngoko, izinto zokwakha kufuneka zikhethwe ukuze kuqinisekiswe ukucaca kwesandi esingaphakathi.
Uyilo lwangaphakathi nolukhululekileyo lwangaphakathi lwebhodi yezamaminerali lunokusebenza okuhle kakhulu ekuguquleni amandla esandi esandi. Ibhodi yoboya yamaminerali isebenzisa imicu emide ekumgangatho ophezulu njengezinto eziluhlaza zokuvelisa. Amaza esandi abangela ukuba ifayibre ibuye ibuye ixesha elide, enokuguqula amandla esandi amaninzi abe ngamandla e-kinetic. Kwangelo xesha, imingxunya enzulu engaphakathi ebhodini yezimbiwa inokuvumela amaza esandi angaphezulu ukuba andise ixesha lokuhamba. Ngaphantsi kwesenzo sokuphambana, amandla esandi esandi aguqulwa abe ngamandla obushushu.
Imiyalelo yokufakwa kwebhodi yezamaminerali
Okokuqala, khetha iigridi ezahlukeneyo zephahla ngokweemithwalo ezahlukeneyo okanye iimfuno.
Okwesibini, iipaneli zoboya bezimbiwa kufuneka zifakwe kwaye zisetyenziswe kwindawo apho amaqondo obushushu asezantsi angama-80%.
Okwesithathu, ufakelo lweepaneli zoboya obunamaminerali kufuneka lugqitywe ngomsebenzi ongaphakathi omanzi, imibhobho eyahlukeneyo edongeni ifakiwe, kwaye imibhobho yamanzi kufuneka ihlolwe ngaphambi kokuba kwakhiwe.
Okwesine, xa ufaka iipaneli zoboya bezimbiwa, iigloves ezicocekileyo kufuneka zinxibe ukuze kuthintelwe iipaneli ukuba zingcolile.
Okwesihlanu, igumbi emva kokufakwa kwephaneli yoboya obunamaminerali kufuneka ingene umoya, kwaye iingcango kunye neefestile kufuneka zivaliwe ngexesha kwimeko yemvula.
Okwesithandathu, kwisithuba seeyure ezingama-50 emva kokwakhiwa kwebhodi yeglubu yomxube, akufuneki kubekho vibration eyomeleleyo ngaphambi kokuba iglue inyangeke ngokupheleleyo.
Okwesixhenxe, xa ufaka kwindawo enye, nceda usebenzise ibhendi efanayo yeemveliso.
Okwesibhozo, ibhodi yoboya yamaminerali ayinakukwazi ukuthwala izinto ezinzima.
Edlulileyo: I-Mineral Fibre Ceiling BD001
Okulandelayo: I-Mineral Fibre Ceiling BC004